Suuraawwan hawwatoo Afrikaa torbee kanaa: Waxabajjii 29, hanga Adoolessa 5, 2018 - BBC News Afaan Oromoo
Suuraawwan hawwatoo Afrikaa torbee kanaa: Waxabajjii 29, hanga Adoolessa 5, 2018
Filannoo suuraawwan babbareedoo Afrikaafi addunyaa mara irraa
Goodayyaa suuraa Moodeeliin waltajjii agarsiisa tiyaatiraa uf qopheesiti yeroo fashinii Durban Adoolessa , ka wal-dorgomii farda kibbaa Afriikaa keessatti.
Goodayyaa suuraa Ka dhaadanoon waga kana "yeroon ammaa" jedhu, qindeessootti, dizaaynara fashinii yeroo hin qamne uumaa, elementii suura sa'aatii itti dabala jedh akka uffata yaadanno kennuuf.
Goodayyaa suuraa Magaalaa daldala ka kibbaa Afriikaa keessatti , namiiichi kun dhaadanno "dhaala ta'ii " jedhu gula deemuuf rifeensa akka durii Nelson Mandela gaafa darggageessa muratuu , muratee. Yoo jiraatte ji'a kana keessa gana 100 ta'aa Nelson Mandela.
Goodayyaa suuraa Siidaa Patrice Lumumba ifa baasaan magaaala Brussels Belgium keessatti ka koliniin nama dimokratwaa ripabilikaa kongoo walabummaatti baasee kabajjaa kennutiif, adoo hin ijeesini. Akka himaniiti, ijeecha isa Belgium fi Amerikaatti gargaree jedhan.
Image copyright Mathias Wasik
Goodayyaa suuraa Swaziland keessatti, biyya tokkooti Afriikaa keessa mootii jalatti buluu, yeroo qara boonsumaan qunnamtii saalaa dhiiraafi dhiiraa ayyaaneffate
Goodayyaa suuraa Magaalaa Bamako Maalii keessatti gurba gosa Fluani mormii cal'isaa ta waraana jiddu tiksiituu horii fi qonnaan- jiraataa dhaabuu barbaaduu itti hirmaate
Goodayyaa suuraa Taphataan meeshaa muuziqaa afuuraan taphatamu beekamaan kaameeruunii Manu Dibango gana 60 ayyaaneffachuuf agarsiisa-sirbaa magaala Abidjan Ayivoorii Koosti keessatti tapha agarsiisee.
Goodayyaa suuraa Awuroppaa keessatti, Francia Kashamba ka lamii Uganda, balbala mana barnoota ka dhiisan ka amma godaantooni itti galtu keessa eja, magaalaa barseloona, Ispeen keessa.
Goodayyaa suuraa Magaalaa Monrovia, Liibeeriyaa keessatti,, Sando Brownell fi niitiin isa keekii wal-nyaachisan ka keessummaan daaw'atuu.
Goodayyaa suuraa Nadheen tun ta gosa Turkaana makiinaa- fe'isaa kan jalaati boqoti gaafa ayyaana Loiyangalani Keeniyaa keessa.
Fakiiwwan kun Mathis Wasik, AFP, Getty Images, Reuters fi EPA irraa walitti qabaman.